ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား – Voice of Myanmar
ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား
Category: ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား
ကိုဗစ်၁၉ ကပ်ရောဂါ လက်ရှိအခြေအနေ
ဧပြီ ၂၅-၂၀၂၂ Voice Of Myanmar ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါဟာ ကူးစက်မှုနှုန်းတွေ လျော့လာနေတယ်လို့ ထင်မှတ်နေကြပေမယ့်လည်း ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ တကျော့ပြန် ကူးစက်ပြန့်နှံ့နှုန်း မြင့်တက်လာနေတာတွေ၊ ကိုဗစ်ရောဂါ မူလဗီဇတွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး ကူးစက်မှုနှုန်းတွေ တရိပ်ရိပ် တက်လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကပ်ရောဂါဘေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာနေပြီး အများပြည်သူ သိရှိရအောင် ကျန်းမာရေးစာပေတွေ ရေးသားဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူ ဒေါက်တာတင့်ဆွေကို လက်ရှိ ကပ်ရောဂါဘေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး VOM က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ VOM ။ ။ Covid 19 က ဗီဇကွဲတွေ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြစ်နေတာမှာ အခု လက်ရှိ နောက်ဆုံးပေါ် Omicron BA-2 နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ ကူးစက်ခံရသူတွေမှာ ခံစားရတဲ့…
ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား, သတင်း, အင်တာဗျူးLeaveacomment
အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ် မကြုံစဖူးနှုန်းနဲ့ ကူးစက်နေတယ်လို့ WHO သတိပေး
ဂျီနီဗာ၊ ဒီဇင်ဘာ-၁၅-၂၀၂၁ မျိုးဆက်(VOM) အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ဟာ ကမ္ဘာတ၀န်းမှာ မကြုံစဖူးသောနှုန်းနဲ့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်မှာ သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောင်းလဲထားတဲ့ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ဟာ လက်ရှိမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၇၇ နိုင်ငံမှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတည်ပြုခြင်းမရှိတဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေမှလည်း ကူးစက်မှုတွေရှိနေနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ တက်ဒရို့စ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ကို ကိုင်တွယ်ဖို့လုံလောက်မှုမရှိသေးတဲ့အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာကို ခံစားရဖွယ်မရှိပေမယ့် ကူးစက်မှုတွေပြားလာပါက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်တွေ နောက်တစ်ကြိမ်ပြိုလဲသွားနိုင်ကြောင်း သူကပြောပါတယ်။ အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ နို၀င်ဘာလအတွင်းက စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ နိုင်ငံတွင်းမှာ ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ တောင်အာဖရိကသမ္မတ ရာမာဖိုဆာဟာ…
ကမ္ဘာ့သတင်း, ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား, သတင်းLeaveacomment
အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ် မကူးနိုင်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူးလို့ သတိပေး
လန်ဒန်၊ ဒီဇင်ဘာ-၁၁ မျိုးဆက်(VOM) ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ်ထိုးနှံရုံနဲ့ အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ မလုံလောက်ကြောင်း ဗြိတိန် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာ သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတွေဟာ အိုမီခရွန်နဲ့ဒယ်လ်တာဗိုင်းရပ်စ်တို့ကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ အာနိသင်ကျဆင်းမှု များရှိကြောင်း ဗြိတိန်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ကနဦးလေ့လာမှုတွေမှာ တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တတိမြောက်ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပါက ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုကို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတော့ အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ နောက်ထပ် ၄၄၈ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိချိန်ထိ ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်းမှာ ၁၂၆၅ ဦးထိရှိလာပြီဲဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်စတင်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကို ကျဆင်းစေမလားဆိုတာဟာ အဓိက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ် ဖြစ်လာနေပါတယ်။ Ref:…
လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတွေက အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ WHO ပြော
ဂျီနီဗာ၊ ဒီဇင်ဘာ-၈-၂၀၂၁ မျိုးဆက်(VOM) လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတွေဟာ အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်ဆဲဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)တာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးက ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်မှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးစမ်းသပ်ချက်တွေအရ ဖိုက်ဇာကာကွယ်ဆေးကို တစိတ်တပိုင်းရှောင်လွှဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေဟာ အိုမီခရွန် ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ကို တိုက်ထုတ်ရာမှာ အာနိသင်များစွာကျဆင်းကြောင်း သုတေသီတွေက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ထိပ်တန်းတာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာမိုက်ရိုင်ယန်ကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ဟာ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ရှောင်လွှဲဖို့ပိုကောင်းတဲ့ လက္ခဏာမရှိဘူလို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိချိန်ထိ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတွေအားလုံးအတွက် ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေရှိကြောင်း၊ အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါခံစားရမှုနဲ့ ဆေးရုံတက်ရတာတွေဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်စရာမရှိဘူးလို့ ဒေါက်တာမိုက်ရိုင်ယန်က ပြောဆိုပါတယ်။ Ref: BBC Photo:AP…
KT(VOM) Covid-19 ကူးစက်ရောဂါရဲ့ မျိုးကွဲဗီဇတခုဖြစ်တဲ့ (အိုမီခရွန်)ဟာ အာဖရိကတိုက်မှာဖြစ်ပွားနေပြီး တစ်နေ့ထဲကူးစက်သူ ၁၀၅၀၀ လောက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ တွေ့နေရသလို အိန္ဒိယမှာလည်း ၂ ယောက်တွေ့တယ်ဆိုတာကို Breaking News မှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အိုမီခရွန်ဟာ ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်တယ်၊ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပြင်းထန်တယ်ဆိုပြီး သတင်းစကားတွေအရလည်း သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်မှုမရှိအောင် ပြည်သူတွေဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပြီဒ Covid-19 ရဲ့ဆိုးဝါးမှုတွေကိုတတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားစဥ်ကာလမှာ စာရေးသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါပြီ။ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြောင့် ဆွေမျိုး၊ ဆရာသမား၊ မိသင်္ဂဟတွေ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြရတာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တခုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးနဲ့မကြုံတွေရပါစေနဲ့ဆိုပြီး ဆုတောင်းမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပွားနှုန်း နည်းပါးတဲ့ မြို့ရွာတွေမှာတော့ အကြောက်တရားမရှိတာလား၊ မထူးဇာတ်ခင်းတာလားတော့မသိ၊ လူစုလူဝေးတွေလုပ်ကြ၊စားသောက်ဆိုင်၊စျေးတွေမှာ Mask မတတ်ဘဲ သွားလာမပျက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဈေးထိပ်တွေမှာ လူမရှိဘဲ အသံချဲ့စက်နဲ့(အသံသွင်းထားတဲ့စည်းကမ်းချက်)အော်နေပေမယ့် စျေးထဲမှာ Mask မတတ်ဘဲ စျေးရောင်းချနေတာတွေ၊စျေးဝယ်နေတာတွေမြင်တွေ့နေရတာဟာ စစ်ဆေးမယ့်သူမရှိဘဲ အော်ယုံသာအော်နေတဲ့…
ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစားLeaveacomment
Omicron ကိုဗစ်မျိုးကွဲ ကူးစက်မလာစေဖို့ သတိပြုပါ
သွေး (စစ်ကိုင်း) ကမ္ဘာတဝှမ်း လူသားတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝနဲ့ စီးပွားရေးတွေကို ထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါပိုးဟာ မျိုးကွဲအမျိုးမျိုးနဲ့ အသွင်ပြောင်းပြီး ဆက်လက်ကူးစက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိလာရတဲ့ မျိုးကွဲကိုတော့ Omicron လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မျိုးကွဲပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO)က ဒီမျိုးကွဲဟာ အရင်တွေ့ရှိထားတဲ့ ကိုဗစ်မျိုးကွဲတွေထက် ကူးစက်နိုင်မှု ပိုမိုမြန်ဆန်, မြင့်မားတာကြောင့် နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ ပြင်ဆင်သင့်တာ ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ သတိပေးထား ပါတယ်။ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူးစက်ခံရသူ အများအပြား ရှိခဲ့ရုံသာမက သေဆုံးမှုတွေလည်း များပြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာ Omicron မျိုးကွဲ ကူးစက်ခံရမှု မရှိအောင် တစ်ဦးချင်းစီ, တစ်ယောက်ချင်းစီက ကြိုတင်ကာကွယ်ကြဖို့ အထူးလိုအပ်နေပါတယ်။ ကိုဗစ်အသွင်ပြောင်းကူးစက်မျိုးကွဲဖြစ်တဲ့ B.1.1.529 ကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက Omicron လို့…
ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား, ဆောင်းပါးLeaveacomment
“လုံခြုံဘေးကင်းတဲ့ အစားအစာတွေ စားသုံးနိုင်ဖို့ ဆိုရင်…”
‌သွေး (စစ်ကိုင်း) လူသားတို့ရဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှု ဘဝမှာ “စား, ဝတ်, နေ” ဆိုတဲ့ အရေး ၃ ပါး ရှိနေပြီး ‘စားသောက်ရေး’ က ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေပါတယ်။ အသက်ရှင်ဖို့ ကျမတို့ အစားအစာတွေ စားသောက်နေရပေမယ့် ဒီအစားအစာတွေက စိတ်ချရရဲ့လား? စဉ်းစားစရာပါ။ ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေလို့ ပါပဲ။ လောဘတက်နေတဲ့ အစားအစာထုတ်လုပ်သူတချို့ဟာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို လိုက်နာခြင်း မရှိကြပါဘူး။ မြို့ပြမှာ သောက်သုံးနေကြတဲ့ ရေသန့်ဘူးတွေဟာ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာနေသလို FDA ရဲ့ ထောက်ခံချက် မပါဘဲ ထုတ်လုပ်နေကြသူတွေ ရှိနေတာကို ရှောင်တခင် စစ်ဆေးမှုတွေအရ သိရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ရေသန့်ဘူးတွေကို ပလတ်စတစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့…
ပခုက္ကူက အထူးကု ဆရာဝန်တွေ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပြီးနောက် ဧရာဝတီ အနောက်ဘက်ခြမ်းက ပြည်သူတွေ ကျန်းမာစောင့်ရှောက်မှု အခက်ခဲရှိနေ
1 year ago Editor Htein Lin
ဧပြီ ၁၆ ၊ ၂၀၂၁ KTG (VOM) မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူမြို့က အထူးကု ဆရာဝန်တွေ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာကြောင့် ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ ချင်းတောင်ခြေ အကြားက ဒေသခံ ပြည်သူတချို့ဟာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိဖို့အတွက် အခက်တွေ့နေရတယ်လို့ အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ လူမှုကူညီရေး အသင်းတွေဆီက သိရပါတယ်။ ” ပခုက္ကူမှာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး နဲ့ ပုဂ္ဂလိက အထူးကု ဆေးရုံ ၂ ရုံ ၊ ဆေးခန်း ၂၀ ကျော်ရှိတယ်၊ အထူးကု ဆရာဝန် ၉ ယောက်ရှိတဲ့အနက် ၆ ယောက်က ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတော့ အရေးပေါ် လူနာတွေကို မုံရွာ ကုတင် ၃၀၀ စစ်ဆေးရုံနဲ့ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူ အနည်းစုက မန္တလေးဆေးရုံးကို သွားပြကြရတယ်၊ ငွေကြေး မပြည့်စုံတဲ့…
ကျန်းမာရေး, ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား, မြန်မာသတင်း, သတင်းLeaveacomment
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို နောက်လမှာ ပြည်သူထဲက သတ်မှတ်အဆင့်လိုက် ထိုးခွင့်ရမယ်
1 year ago 1 year ago Editor Htein Lin
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ-၂၈ – ၂၀၂၁ ရှိုင်းအောင်(VOM) အိန္ဒိယနိုင်ငံက ရောက်ရှိတဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေတသိန်းခွဲ၊ ထိုးနိုင်တဲ့လူဦးရေ လူတသန်းခွဲစာကို ပထမဦးစားပေးစနစ်အနေနဲ့ ထိုးပေးမှာဖြစ်သလို ကျန်းမာရေးဝန်းထမ်းတွေနဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ ဇန်နဝါရီ ၂၇ရက်ကစပြီး ထိုးပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုထိုးဖို့ နယ်တွေကိုလည်းပို့ပေးနေတာမှာ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက လေရှီးမြို့ကို ရောက်တဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထည့်တဲ့ ဆေးပုံးမှာ Alarm Cross ပြနေလို့ အထက်အဆင့်ဆင့်ကို အကြောင်းကြားထားပေ မယ့် အကြောင်းမပြန်သေးလို့ ထိုးနှံတာတွေ မလုပ်သေးကြောင်း လေရှီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စအပါအဝင် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေ ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ အဆင့် အလိုက်သတ်မှတ်ထားပုံတွေ သိနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ခင်ခင်ကြီးကို VOM သတင်းထောက် ကိုရှိုင်းအောင်က…
Interview, ကျန်းမာရေး, ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား, အင်တာဗျူးLeaveacomment
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် ဘာတွေ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် လိုအပ်မလဲ ?
နေပြည်တော်-ဇန်နဝါရီ ၂၆-၂၀၂၀ ကိုလတ် (VOM) ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ ၂ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်တက်ရောက်မယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့ လွှတ်တော်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွေကို ကိုဗစ် ပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေက ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်တွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ဝဏ္ဏစိုးက ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်လည်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ လိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီး အလုံးစုံ ရောဂါကင်းစင်စေတဲ့ ဆေးမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ “ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် ရောဂါကာကွယ်ဆေး (၆) မျိုးထိုးသလိုပါပဲ။ အဲ့တော့ သတိထားပြီးနေရပါတယ်။ ဖျားလို့ရှိရင် နောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာယားယံတာတို့ ကိုက်ခဲတာတို့ဒါမျိုးဖြစ်ရင် ချက်ချင်းဟိုဟာဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံးတစ်ရက်ကတော့ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ရပါတယ်။ ရေများများသောက်ရပါတယ်။ အစားကိုပုံမှန်လေးစားပေးရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ သဘောကတော့ အရက်တို့ ဆေးလိပ်တို့နဲ့ အဲ့ကာလမှာတော့ ရှောင်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီကာကွယ်ဆေးက…